Kuhlonishwe onompilo ngomsebenzi wabo | News24
Kuhlonishwe onompilo ngomsebenzi wabo
INHLANGANO engenzi nzuzo Impumelelo Community Project and Pre-School ihloniphe onompilo nngokubagqokisa amajazi ngemuva kokuba beqede umsebenzi wokuthola ulwazi ngokuthi bangaki abantu abadinga ukunikezwa usizo kanye nolwazi ngomdlavuza.
Le nhlangano ezinze endaweni yase-Azalea inonompilo abalinganiselwa ku 38 abangaphansi kwayo kanti bonke banikela ngesikhathi sabo kanye namandla abo baqala ukusiza umphakathi.
Ngokusho kwasekela sihlalo wale nhlangano uMnuz Fanele Zondi uthe ngaphambi kokuba labo nompilo bahlonishwe baqale benza umsebenzi wokuthi bathole ulwazi lokuthi lungakakanani ulwazi abantu base-Azalea abanalo mayelana nomdlavuza ikakhulukazi umdlavuza wesibheletho.
“Bawenze kahle kakhulu lo msebenzi kanti into enkulu abayitholile ukuthi abantu abaningi abanalo ulwazi oluningi kanti abanye abazi ngohlelo lokuhlanza isinya. Kulo mcimbi wonompilo kube sekufundiswa amalunga omphakathi ngezinto abangazenza ukwenza isiqiniseko sokuthi banakekela imizimba yabo baphinde bahlolele nomdlavuza kusanesikhathi,” kubeka yena.
USihlalo wale nhlangano uNkk Ngcane Zondi uthe seloku iqalile le nhlangano babhekelele imindeni ethi ayibe ngama-200 endaweni yonke yase-Azalea. Uthe inkinga abasabhekene nayo ukuthi abalutholi uxhaso kanti kuyaye kube nzima njengenhlangano engenzi nzuzo njengoba kubuye kudingeke ukuthi bathengele imindeni ehlwempu ukudla.